AbakwaTaliban bakulungele ukuqala kabusha ukusebenza kwesikhumulo sezindiza iKabul 'ngezinsuku ezimbalwa'
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-Afghanistan Breaking » AbakwaTaliban bakulungele ukuqala kabusha ukusebenza kwesikhumulo sezindiza eKabul 'ngezinsuku ezimbalwa'
Izindaba ze-Afghanistan Breaking • Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
AbakwaTaliban bakulungele ukuqala kabusha ukusebenza kwesikhumulo sezindiza eKabul 'ngezinsuku ezimbalwa'
n) AbakwaTaliban bakulungele ukuqhubeka nokusebenza kwesikhumulo sezindiza saseKabul 'ezinsukwini ezimbalwa'
Izwe laseMelika liqede ukuthuthwa kwabantu abavela eKabul nakuwo wonke umsebenzi wabo e-Afghanistan ngo-Agasti 30.
UTaliban ukuqala kabusha ukusebenza eKhamid Karzai International Airport.
Isikhumulo sezindiza saseKabul sizosebenza ezinsukwini ezimbalwa.
UTaliban uthathe iKabul ne-Afghanistan yonke ngo-Agasti 15.
Umele iTaliban umemezele namuhla ukuthi isikhumulo sezindiza i-Kabul's Hamid Karzai International Airport sizoqala ukusebenza okujwayelekile ezinsukwini ezimbalwa nje.
“Sikulungele ukuqhubeka nokusebenza kwesikhumulo sezindiza. Sizokukwenza ezinsukwini ezimbalwa, ”kusho u-Anas Haqqani, oyilungu lesikhundla samaTaliban kwinhlolokhono.
UHaqqani uchaze ukuhoxiswa kwamasosha aseMelika e-Afghanistan njengomcimbi "omkhulu" futhi wabiza usuku lapho ukuphuma kwabantu kwaphela usuku "lomlando".
Izwe laseMelika liqede ukuthuthwa kwabantu abavela eKabul nakulo lonke elase-Afghanistan ngo-Agasti 30. Isinqumo sokuqeda ukusebenza kwe-US e-Afghanistan esaqala ngo-Okthoba 2001 futhi saba umkhankaso omude kunayo yonke yase-US emlandweni samenyezelwa nguMongameli uJoe Biden ku Ephreli 14, 2021.
Ngemuva kokumenyezelwa kwalesi sinqumo, amaTaliban aqala ukuhlasela amabutho kahulumeni wase-Afghanistan. Ngo-Agasti 15, amasosha amaTaliban angena eKabul ngaphandle kokubhekana nokuphikiswa, futhi athola amandla aphelele enhlokodolobha yase-Afghanistan kungakapheli amahora ambalwa.
Isikhumulo sezindiza i-Hamid Karzai International Airport, eyaziwa nangokuthi yi-HKIA, itholakala ebangeni elingamakhilomitha ayi-3.1 ukusuka enkabeni yedolobha laseKabul e-Afghanistan. Isebenza njengesinye sezikhumulo zezindiza ezinkulu zamazwe omhlaba futhi njengenye yezisekelo ezinkulu zamasosha, ekwazi ukwakha izindiza ezingaphezu kwekhulu.
IHamid Karzai International Airport phambilini yabizwa ngokuthi yiKabul International Airport kwathi endaweni yayo kwathiwa yiKhwaja Rawash Airport, yize iqhubeka nokwaziwa ngokusemthethweni yizinkampani ezithile zezindiza ngegama lakamuva. Isikhumulo sezindiza sanikezwa igama laso njengamanje ngo-2014 ukuhlonipha owayenguMongameli wangaphambilini UHamid Karzai.